Kindle Oasis နဲ့ Kobo Aura H2O တို့ကဘာကောင်းလဲ။ | eReaders အားလုံး
Kindle Oasis နှင့် Kobo Aura H2O, colossi ၏တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်း?
Joaquín Garcia က | | Amazon Kindle, စာဖတ်သူများ, Kobo
မနေ့က Amazon Kindle အသစ်ကိုရောင်းချလိုက်သည်။ ၎င်းကို Bezos ကိုယ်တိုင်ကြေငြာခဲ့သည် အကောင်းဆုံး eReader ဒါပေမယ့် Amazon ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေအကြောင်းပြောစရာရှိသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လိုချင်ခဲ့တယ် Kobo Aura H2O နှင့် Kindle Oasis ကိုယူပါစျေးကွက်တွင်စွမ်းအားအရဆုံးနှင့်စျေးကြီးဆုံး eReader နှစ်ခု
အမှန်တရားကတော့ဒီနှိုင်းယှဉ်ချက်တွေကြားမှာဖတ်ရှုသူနှစ် ဦး ဟာပစ္စည်းကိရိယာတွေပါ သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရည်ရွယ်နေကြသည် သူတို့နှစ် ဦး သည်တူညီသောအချက်များရှိသော်လည်းအသုံးပြုသူအတွက်အကောင်းဆုံးစာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့မှတိုင်းတာရန်နှင့်ပြသရန်ကြိုးစားပါမည်။
1 Kindle အိုအေစစ်သတ်မှတ်ချက်များ
2 Kobo Aura H2O သတ်မှတ်ချက်များ
6 Software များ
E Ink Carta ™နှင့်ပါ ၀ င်သည့်စာဖတ်နိုင်သည့်အလင်း၊ ၃၀၀ dpi၊ ပိုကောင်းသော font ဖောင့်နှင့်မီးခိုးရောင်အကြေး ၁၆ ခုပါဝင်သည့် Paperwhite နည်းပညာနှင့် ၆ လက်မ Touchscreen ပါရှိသည်။
143 x 122 x ကို 3.4-8.5 မီလီမီတာ
WiFi ဗားရှင်း ၁၃၁/၁၂၈ ဂရမ်နှင့် ၁၁၃၃/၂၄၀ ဂရမ် WiFi + 131G ဗားရှင်း (အလေးချိန်ကိုအဖုံးမပါဘဲပထမနှင့်ဒုတိယနှင့်တွဲထားသည်)
4 GB ထက်ပိုသော eBooks 2.000 ကျော်သိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း၎င်းသည်တစ်ခုချင်းစီ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည်
Wi-Fi နှင့် 3G ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်သာ Wi-Fi
Format 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF၊ အကာအကွယ်မဲ့ MOBI၊ PRC၊ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP
Kindle Oasis ၏ e-reader ...
ကျွန်ုပ်တို့၏အပါးဆုံးနှင့်အပေါ့ဆုံး Kindle; နာရီအဆင်ပြေဖတ်ပါ။
မသန်မစွမ်းသောစာမျက်နှာလှည့်ခြင်းအတွက် Ergonomics ခလုတ်ဒီဇိုင်း
သာ။ ကြီးမြတ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အတူ Kindle ။ ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်သားရေဘူးသည်ဖုန်း၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလပေါင်းများစွာသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
ဖယ်ရှားနိုင်သောအဖုံး၏အနက်ရောင်၊ burgundy or walnut ကိုရွေးချယ်ပါ။
300 dpi resolution မြင့်မားသော display - ပုံနှိပ်ထားသောစက္ကူနှင့်တူသည်။
Kobo Aura H2O သတ်မှတ်ချက်များ
၎င်းတွင် E Ink Letter နည်းပညာနှင့် ၆.၈ လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ ComforLight၊ ၃၆၅ dpi နှင့်အကောင်းဆုံးဖောင့်နည်းပညာတို့ပါ ၀ င်သောစာဖတ်ခြင်းအလင်းပါဝင်သည်။
၁၇၉ x ၁၂၉ x ၉.၇ မီလီမီတာနှင့် ၂၃၃ ဂရမ်။
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု၏4Gb ။
Wifi ဆက်သွယ်မှုနှင့် Microusb ထွက်ရှိမှု။
EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR ကို format လုပ်ပါ။
Kobo Aura H2O အနက်ရောင်
Kindle Oasis ၏ဒီဇိုင်းသည်အလွန်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်း Kobo Aura H2O တွင်ဖြစ်သော်လည်းသေးငယ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်း၎င်းကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရသည်။ အမှန်တရားကတော့ဒီကိရိယာနှစ်ခုလုံးမှာဒီဇိုင်းကပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့စာဖတ်ခြင်းကိုရှာသည်။ eReader ကိုဖတ်နိုင်သော်လည်းငါတို့လက်သည်လေးလံနေသည်ကိုသတိမပြုမိဘဲ။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြုလုပ်သော Kobo Aura H2O ၏ရာဘာအဖုံးကိုသတိပြုသင့်သည် လက်ချောင်းအနည်းငယ်နှင့်ပင်လက်ဖဝါးများနှင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ Kindle Oasis ၏ဖြစ်ရပ်က၎င်း၏အထူသည်ပြီးဆုံးသွားခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားစာအုပ်ရှိခြင်း၏ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ကိုလက်ဖဝါးထဲတွင်မထားနိုင်ပါ။ ဒီကိစ်စမှာငါထင်တယ် Kobo H2O သည် Kindle Oasis ထက်သာလွန်သည်.
Kobo Aura H2O တွင် ၆.၈ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိပြီး resolution အနေဖြင့် 6,8 x 1430 pixels ရှိပြီး 1080 dpi ရှိသည်။ ၎င်းတွင် Kindle Oasis ကဲ့သို့ Carta နည်းပညာရှိသော်လည်း၎င်း၏အလင်းသည် Kindle Oasis ကဲ့သို့မကောင်းပါ။ အဲဒီအစား Kindle Oasis သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအလင်းရောင်ရရှိထားသည် ဒါပေမယ့်နည်းနည်းသေးငယ်တယ်။ အရွယ်အစားနေသော်လည်း, ဒီရှုထောင့်၌တည်၏ Kindle Oasis သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်ထက်သာလွန်သည်။
ကိရိယာနှစ်ခုစလုံး၏ဘက်ထရီသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုလထက်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် Kindle Oasis တွင်အရန်ဘက်ထရီပါရှိသည် ၎င်းသည် eReader ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုမိုတိုးချဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကရိုးသားဖို့လိုတယ်၊ PowerBank က Kobo Aura H20 ကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်။ သို့တိုင်ပုံရသည် လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်းက Kindle Oasis ၏ ဦး ခေါင်းကိုစတင်သည် Kobo Aura H2O ပေါ်တွင်သာမကသုံးစွဲသူများနည်းပါးသောကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည့် eReader လိုအပ်သည်။
Kobo Aura H2O ကျန် Kobo စက်များနှင့်အတူဆော့ဝဲလ်အခြေခံကိုအသုံးပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် eReader ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာစရာမလိုပဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အိတ်ဆောင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်, နောက်ပိုင်းတွင်ဖတ်ရှုဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဝန်ဆောင်မှု။ The Kindle Oasis သည် Goodreads နှင့် SendToKindle နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်, များစွာသောသုံးစွဲသူများနှစ်သက်သောကြီးစွာသော applications များ။ ဒါပေမယ့်ပုံစံများနှင့်ပတ်သက်။ , Kobo Aura H2O သည် ePub ပုံစံကိုထောက်ပံ့သည် အဆိုပါ Kindle အိုအေစစ်မနေစဉ်။ ဒီရှုထောင့်၌ Kobo Aura H2O အနိုင်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်ုပ်တို့အမေဇုန်ဂေဟစနစ်ကိုတကယ်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်မဟုတ်ပါ။
Kindle Oasis သည်လက်ဆောင်အိတ်နှင့်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်သောခလုတ်တစ်ခုတပ်ထားခြင်းအပြင်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည် Oasis သည်လက်ဝဲသို့မဟုတ်ညာသန်သူများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဤအချက်သည်ခိုင်မာသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာထိုပြproblemsနာများကြောင့်၎င်းတို့၏ eReader တွင်ကောင်းစွာဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိသောလူများရှိသည်။ ဒါပေမယ့် Kobo Aura H2O ကိစ္စမှာ IP67 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အလင်းကိုထိန်းညှိပေးသည့် ComfortLight ပတ် ၀ န်းကျင်အလင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့သည်အပိုဒြပ်စင်များဖြစ်ပြီးအာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဒီကိစ်စမှာငါထင်တယ် devices နှစ်ခုလုံးကိုချည်ထားတယ် ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုပိုကောင်းလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ဝဲဘက်ရှိလျှင် Kindle Oasis ကိုရွေးချယ်မည်ဖြစ်သော်လည်းကမ်းခြေသို့သွားသောအခါ Kobo Aura H2O သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းသည်များစွာသောလူတို့အတွက်ကြီးမားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာသည်။ အလွန်ကြီးစွာသော ereader သည်၎င်း၏ pixel (သို့) နည်းပညာများဖြင့်တိုင်းတာသည်သာမကစျေးနှုန်းနှင့်လည်းတိုင်းတာသည်။ eReader တွင်စျေးနှုန်းနိမ့်သည်။ Kobo Aura H2O သည်ယူရို ၁၇၉ ဖြစ်သည်, eReader အတွက်အလွန်စျေးကြီးသော်လည်းအမှန်တရားမှာလူတို့သည်ဤစျေးနှုန်းအတွက်ထိုကဲ့သို့သော ereader ကို ၀ ယ်လိုကြသည်။ The Kindle Oasis သည် ၂၈၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်Kobo Aura H2O ထက်ယူရိုတစ်ရာပိုများသော်လည်း၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက အရံဘက်ထရီနှင့်အတူအမှုဆောင်ခဲ့ စျေးနှုန်းသည် Kobo Aura H2O ထက်စျေးနှုန်းသက်သာပြီးဘက်ထရီနှင့်အဖုံးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအမှု၌ကြောင့်ပုံရသည် များစွာသောလူများအတွက်ဆုရသူမှာ Kobo Aura H2O ဖြစ်သည် ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုမေ့လျော့မပြုရဒါကြောင့် Kindle Oasis အချို့အနာဂတ်အံ့သြစရာပေးလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။
ဝယ်မည် Kobo Aura H2O အနက်ရောင်Kobo Aura H2O » /] | Kindle Oasis ၏ e-reader ...Kindle အိုအေစစ်» /]
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါသူတို့ကအလွန်ကြီးစွာသော eReaders နှစ်ခုဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်, Kindle Oasis သတင်းအနည်းငယ်သာယူဆောင်လာပေမယ့်သူကယူဆောင်သောအရာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်တို့ကို Kindle Voyage ဆိုလိုသောလှည့်ကွက်ကိုမေ့လျော့စေနိုင်သည်။ သင်တို့မူကားလည်းရှိသည် Kobo Aura H2O သည်တစ်နှစ်ကျော်ကြာတည်ရှိခဲ့သည်ကိုသတိရပါ၎င်း၏အိုမင်းမှုရှိသော်လည်း Kindle Oasis ကဲ့သို့အသစ်အဆန်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် eReader တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါမဆိုဖြစ်နိုင်သည်ရွေးချယ်ဖို့ခဲ့လျှင် ငါဘယ်ဂေဟစနစ်ကိုကြိုက်သလဲKobo ဒါမှမဟုတ် Amazon ဂေဟစနစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ငါကသက်ဆိုင်ရာ eReader ကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်။ လာပါ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပေမယ့်ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးကသူတို့ကုမ္ပဏီများကြိုက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေကြီးစွာသောကိရိယာများဖြစ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Kindle Oasis နှင့် Kobo Aura H2O, colossi ၏တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်း?
Kobo ၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား၊ ကဒ်ဖတ်စက်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ ၎င်းသည်ပုံစံများကိုပိုမိုဖတ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလေးချိန်ကြီးသည်ကိုအပြစ်ပေးသည်။
Oasis ၏, ငါမကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူငါကပ်လိမ့်မယ် (သင်တို့ကိုသဘောမတူဘူး, ငါ kindle တစ် ဦး တည်းလက်ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကိုင်သင့်သည်ထင်), ၎င်း၏ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်အမေဇုံဂေဟစနစ်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်သောပစ္စည်းနှစ်ခုလုံး၏ပြproblemနာဖြစ်သည်။ ငါသိသလောက်ဆိုရသော် Kindle Oasis သည်ပြောင်းလဲမှုကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေသောအမှုအားမေ့မထားဘဲကိုင်ထားရသည့်ပိုဆိုးသည့် texture ရှိသည်။ အဲဒါကိုဖမ်းရန်နည်းလမ်း။ လာကြည့်ပါ၊ ငါ့ရဲ့အမြင်တွေပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါ Kindle Oasis ကိုပိုပြီးမြင်ရတဲ့အခါငါတို့သံသယတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်မဟုတ်လား။
ယူအက်စ် ၃၀၀ သာစျေးနှုန်းရှိသောနောက်ဆုံးအမေဇုံဖတ်ရှုသူသည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကထွက်ပေါ်လာသောစာဖတ်သူကိုမနိုင်လျှင်၎င်းသည်သူတို့တိုးတက်မှုမရှိသေးသောကြောင့်ပြောင်းလဲရန်ထိုက်သည်။ ငါ့မှာ H300O ရှိတယ်၊ ငါဒီလ Kobo ထွက်လာတာကိုစောင့်ဖို့ငါစောင့်နေ ဦး မယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုငါပြောင်းရတာအရမ်းကောင်းတယ်။
ဟိုင်းဒီနီ၊ Kobo ကိုယ်စားလှယ်များသည်သူတို့၏ eReaders အသစ်များသည်၎င်းတို့၏လက်ရှိအရာများထက်သာလွန်မည်ဟုလပေါင်းများစွာစိတ်ချစေခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ငွေကိုပြင်ဆင်ရန်ပြောရန်သာလိုသည်။ သူတို့ကကြည့်ကောင်းတယ်ဒါပေမယ့်အဆုံးအထိမသိဘူး ဒန်နီဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!
ဤ Kobo eReaders အသစ်တွင်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်ရှိမရှိသိလား (ခလုတ်များ၊ ဖိအားပေးသည့်အာရုံခံကိရိယာများစသဖြင့်?) ။ စာဖတ်သူကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းသည်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ကိုထိဖို့ငါ့လက်ချောင်း။
ထွက်လာမယ့် Kindle Paperwhite အသစ်မှာဘာဖြစ်သွားသလဲ (ဒီ ?? ??) ဖြစ်သည်။
ivan romero အားပြန်ပြောပါ
Oasis သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော eReader ဖြစ်သော်လည်း NOTHING ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ဘာမျှမပြောပါ၊ ဤဈေးနှုန်းကိုမှန်ကန်စေသည်။
အများဆုံးမှာ Voyage စျေးနှုန်းရှိနိုင်သော်လည်းမည်သည့်အဓိပ္ပာယ်မျှမရှိပါ။
အမေဇုံသည် ၆ လက်မအရွယ်အစားဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်းစပိန်တွင်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည့် Kobo ၏အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်။
စျေးနှုန်းကွာခြားမှုမည်သို့ပင်ရှိပါစေ (နှစ်မျိုးစလုံးသည်စျေးကြီးပါသည်)၊ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား (၆″ လုံလောက်ပါသည်) နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း (တစ်ပါတ်ကိုအထူးကြပ်မတ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်ပါသည်)၊ ကျွန်ုပ်တွေ့ရသောအဓိကအားနည်းချက်နှစ်ခုမှာ -
Kindle: "မ ePub၊ မ eReader" ... ဒီစကားစုကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်။
Kobo - သင်ဟာဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးအလျားလိုက်စာဖတ်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုထားတယ်။
119876 လူးဝစ် ဟုသူကပြောသည်
ကျနော့်အမြင်အရဒီအိုအေစစ်ဟာစျေးကြီးလွန်းတယ်၊ ရောင်းအားမှာသူတို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် kobo နဲ့ကွာခြားချက်ကတော့နည်းနည်းလေးပဲ၊ ငါတို့ရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့မဟုတ်ဘူး။ ငါ၌ရှေးအကျဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်များကို“ Amazon” ပုံစံသို့ပြောင်းမည်ဖြစ်သောကြောင့် kobo သို့ပြောင်းတော့မည်။ ကောင်းသည်၊ kobo သည်အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေလိမ့်မည်ဟုငါမျှော်လင့်သည်။
Kindle Paperwhite ကိုကိုင်ထားပါ။
ငါ Kindle3ကိုပြတ်တောက်သွားသည်အထိ ၆ နှစ်လောက်ပျော်ခဲ့ပြီ၊ အခုငါ Kindle Voyage ကိုဝယ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဆီကိုပထမဆုံးရောက်လာတဲ့အရောင်တောက်ပတဲ့ pixel တစ်ခုရှိတယ်၊ နောက်တစ်ခုကအမည်းရောင် pixel တော်တော်များများရှိပြီးအခုငါသူတို့ကိုပြန်ပေးရမယ်။ ။
Amazon ကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဟာ Amazon ထက်ပိုပြီးအရည်အသွေးမြင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေလုပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ငါ Kobo H20 ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။
မှတ်စုများကိုမိုးတိမ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်နှင့်မည်သည့်ထုတ်ကုန်မှ (ဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ) မှကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရှိသည့် ereader မရှိပါ။
BQ သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသစ်ဖြစ်သော BQ Cervantes3နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေသည်
Kindle Oasis VS Kindle Voyage သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံး eReaders နှစ်ခုဖြစ်သည်